कुन नेताको योग्यता कति ? क्याबिनेटमा पीएचडी डाक्टरदेखि एसएलसी पाससम्म « हाम्रो ईकोनोमी
कुन नेताको योग्यता कति ? क्याबिनेटमा पीएचडी डाक्टरदेखि एसएलसी पाससम्म
वनमन्त्री शक्ति बस्नेत मन्त्रालयको व्यस्त दैनिकीसँगै यतिबेला आफ्नै परीक्षाको तयारीमा छन्। राजनीतिशास्त्रको स्नातकोत्तर (एमए) का लागि मन्त्री बस्नेतले अहिले परीक्षा दिइरहेका छन्। बानेश्वरस्थित गोल्डेन गेट कलेजबाट उनले ‘तेस्रो पेपर’ को परीक्षा सकाए। अझै दुइटा विषयको परीक्षा बाँकी नै छ। राजनीतिशास्त्रमै स्नातक बस्नेत स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययनले अझ बढी राजनीतिमा निखार ल्याउने उद्देश्यले अध्ययनमा लागेका हुन्।
क्याबिनेटमा पीएचडी डाक्टरदेखि एसएलसी पाससम्म
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पीएचडी गर्ने डाक्टरदेखि माध्यमिक तहसम्मको मात्र अध्ययन गरेका नेता सहभागी छन्। कुल २४ जनाको क्याबिनेटमा दुईजनाले पीएचडी, ६ जनाले स्नातकोत्तर, ९ जनाले स्नातक, ४ जनाले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र तीनजनाले माध्यमिक तहको शिक्षामात्र अध्ययन गरेका छन्।
नेकपा स्थायी समितिमै झन्डै २० प्रतिशत एसएलसीवाला मात्रै छन्। सत्तारूढ दल नेकपाको माथिल्लो निकाय सचिवालयमा ९ नेता छन्। पार्टीका दुवै अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरू रहेको यो कमिटिमा सबैभन्दा बढी अध्ययन गर्ने नेतामा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ देखिएका छन् भने सबैभन्दा कम प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली, नेता वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेल देखिएका छन्। श्रेष्ठले जनप्रशासनमा एमए (स्नातकोत्तर) गरेका छन् भने ओली, गौतम र पौडेलले माध्यमिक शिक्षाको (एसएलसी) अध्ययन गरेका छन्।
कांग्रेसमा अधिकांश स्नातकोत्तर
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा अधिकांश केन्द्रीय नेताले स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन्। कांग्रेसमा पीएचडी तीनसहित पाँचजना डाक्टर छन्। रामशरण महत, मीनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, शेखर कोइराला र शशांक कोइराला डाक्टर हुन्। सभापति देउवाले एमए, बीएल, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमए, उपसभापति विमलेन्द्र निधिले एमए, अर्का उपसभापति विजय गच्छदारले इतिहासमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। महामन्त्री डा. शशांक कोइराला एमए (चिकित्साशास्त्र) अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले एमए गरेका छन्।
राष्ट्रपति– उपराष्ट्रपति आईए पास
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोजपुर क्याम्पसबाट प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययन गरेकी छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आईएसम्मको अध्ययन गरेका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले आईएस्सी÷ बीएड र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले आईकमसम्मको अध्ययन गरेका छन्।
अन्य नेता कसका कति ?
समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पीएचडी गरेका छन्। २०२६ मा एसएलसीमा बोर्डफस्ट भट्टराईले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका छन्।
त्यस्तै विवेकशील साझाका नेता रवीन्द्र मिश्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी, पञ्जाव विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता र लन्डन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ले बीएलसम्मको अध्ययन गरेका छन्।
यसकारण परीक्षा दिइरहेछु
म अहिले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर (एमए) को परीक्षा दिइरहेको छु। तीनवटा पेपरको परीक्षा दिइसकेँ, अब दुइटा बाँकी छ। २७ असारसम्म म परीक्षाकै तयारीमा छु। परीक्षा दिँदै गर्दा मलाई कर्मचारीले एमपीए (मास्टर अफ पब्लिक एडमिनिस्टेसन) गरेजस्तो लाग्यो।
हामी राजनीति गर्ने मान्छे, राजनीति के हो ? राजनीतिशास्त्र के हो ? यो विज्ञान हो कि, सामान्य अध्ययनको क्षेत्रमात्र हो ? राजनीतिशास्त्रसँग हाम्रा कति अभ्यास व्यवहारतः प्रयोग हुँदै आएका रहेछन् ?सिद्धान्त कहाँ छ, व्यवहार कहाँ छ ? भन्ने बुझ्नकै लागि पढ्न चासो लाग्यो।
अहिले पार्टीमा धेरै जिम्मेवारी पनि छैन, आफूसँग बचेको समय उपयोग गर्न पनि मैले पढ्ने सोचाइ बनाएँ र अध्ययन गर्न थालेको हुँ। मैले योभन्दा अगाडि नै व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर सकिसकेको हुँ। अहिले यो पढ्दै जाँदा मैले धेरै कुरा यसबाट प्राप्त गर्दै गइरहेको छु। प्लेटो, एरिस्टोटल हुँदै कौटिल्य, लाओसेदेखिका अहिलेसम्मका जति पनि विकासक्रम छन्, त्यसको अध्ययनले मान्छेलाई अलिक बढी नै खदिँलो बनाउँछ भन्ने लागेको छ।
राजनीतिका आयाम बुझ्ने, सैद्धान्तिक अध्ययन बढाउनेक्रममा राजनीतिमा लागेका राजनीतिज्ञको व्यवहार, बोलीचाली हेर्दा सिद्धान्तसँग गहिरो ज्ञान भएको मान्छे धेरै कम छ। सैद्धान्तिक ज्ञान एकदमै कम र चलनचल्तीको राजनीति असाध्यै बढी हाबी भएर गएको देखिन्छ। यसले राजनीतिलाई नै खोक्रो बनाएको लाग्यो। त्यसैले आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई अलिकति भए पनि परिमार्जन र परिष्कृत गर्न र राजनीतिलाई अन्र्तयबाट, गहिराइबाट नै राम्रोसँग बुझियो भने समाजलाई प्रभाव पार्न सकिएला भन्ने सोच हो। पढाइबाट आउने सर्टिफिकेटको महत्त्व त छैन हाम्रा लागि, पढाइ यति नै हुनुपर्छ राजनीति गर्न कुनै मापदण्ड छैन। व्यवहारमा केही सिकौं, बुझौं भन्ने लागेर पढ्न थालेको हुँ।
औपचारिक शिक्षा अध्ययन गर्ने वानी पहिल्यै छुटिसकेको बेला अहिले फेरि परीक्षा दिन खोज्नु, अध्ययन गर्न खोज्नु आफैंमा अनौठो अनुभव हुँदो रहेछ। २५÷२६ वर्ष अगाडि जसरी पढिन्थ्यो, त्यो बेला पनि सैद्धान्तिकभन्दा व्यवहारिक विषय कमर्श पढेको मान्छेलाई अहिले आएर फेरि सैद्धान्तिक कुरामा घोत्लिनुपर्दा अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। बजारमा जे राम्रो पुस्तक आउँछ, त्यही पढ्न थालेको मान्छेलाई प्लानिङका विषय र कोर्स पढ्न र दैनान्दिनका कामलाई पनि साथ लिएर जान गाह्रै पर्ने रहेछ। अनुभवको लागि मात्रै अध्ययन गर्दैछु। तर नियमित औपचारिक पढ्ने बानी भने छुटेछ।
राजनीति गर्नेहरूका लागि अध्ययन अति नै आवश्यक छ। हाम्रो नेपाली राजनीतिमा जति पनि हामीले देखे भोगेका नेतृत्व र नेता छन्, त्यसमध्येका कतिपयले औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका छन्, कतिपयले गरेका छैनन् पनि। शिक्षाले मानिसलाई परिस्कृत बनाउँछ, समृद्ध बनाउँछ र तदनुसारका व्यवहार उसले आफ्ना जीवनमा प्रदर्शन गर्न सक्छ, तबमात्र शिक्षाको सार्थकता, औचित्यता पुष्टि हुन्छ। औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका भनिएका नेताहरूबाट पनि त्यो देखिएको छैन। रह्यो, औपचारिक शिक्षा नै नलिएका नेताले पनि स्वअध्ययन त गर्नुभएको छ। तर पनि स्वअध्ययन गरेअनुसारको व्यवहार छैन।
हाम्रा नेताहरूका व्यवहार बोलीमा अहंकार झल्किन्छ। युरोपको पुनर्जागरण कालदेखि यताका सबै हेर्दा अज्ञानीको एउटा सानो झुन्डले शासन व्यवस्थालाई नियन्त्रण गरिरहेको छ। अझ नेपालको सन्दर्भमा भन्दा नेपालले सही बाटो किन पक्डिन सकेनभन्दा अपवादमा बीपी कोइराला जस्ता पात्र पैदा भए। तर यति धेरै अज्ञानीको झुन्ड देखियो कि उहाँलाई पनि काम गर्न दिइएन। पछिल्लो ७०/८० वर्षको इतिहास हेर्दा बीपी जत्तिको उचाइ, ज्ञानको सगरमाथा तथा सिम्बोलका रूपमा रहेको राजनीतिज्ञ मैले अरू देखेको छैन। उहाँलाई अज्ञानीले काम गर्न नदिएका रहेछन्। अहिले पनि मैले त्यस्तै देखिरहेको छु।
राजनीतिशास्त्रको अध्ययनले त्यही देखाइरहेको छ। गीता, महाभारत, पुराणलगायतदेखि अरू किताब पढियो तर राजनीतिशास्त्र वास्तवमै के हो ? पहिलो भाग नीतिशास्त्रको रहेछ। यो आफैंमा एउटा विज्ञान रहेछ। यसलाई जसरी मानवीय जीवन र व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने हो देखिएन, राजनीतिशास्त्रको अध्ययनको कमीले पनि यस्तो देखिएको हुन सक्छ। त्यही भएर पनि सिद्धान्त र जीवन व्यवहारमा हामी कहाँ छौं र हामीले अब कस्तो राजनीति गर्ने भन्ने बुझ्नकै लागि राजनीतिशास्त्र पढ्न थालेको हुँ।
– घिमिरे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
(अन्नपुर्णपोष्टबाट रामकृष्ण अधिकारी)